Iindaba-Iingcebiso zokunciphisa ubushushu bomoya obuthathayo kwii-gensets zakho
Iingcebiso zokunciphisa ubushushu bomoya obuthathayo kwii-gensets zakho
Ngokusisiseko, iimpazamo ze-gensets zinokucwangciswa njengeendidi ezininzi, enye yazo ibizwa ngokuba kukungenisa umoya.
Indlela yokunciphisa ubushushu bomoya obuthathayo kwiseti yejenereyitha yedizili Ubushushu bekhoyili yangaphakathi yeeseti yejenereyitha yedizili esebenza iphezulu kakhulu, ukuba iyunithi iphezulu kakhulu kubushushu bomoya, ayizukulungela ukusasaza ubushushu, ichaphazele iyunithi ukusebenza, kunye nokunciphisa ubomi benkonzo. Ke ngoko, ngumba ekufuneka ujongiwe kwindlela yokunciphisa iqondo lobushushu lomoya, apha sabelana ngeendlela ezimbini ezifanelekileyo zokunciphisa isixhobo kubushushu bomoya.
Amanzi aphantsi komhlaba asetyenziselwa ukunciphisa iqondo lobushushu bokungeniswa komoya ngokusebenzisa amanzi aphantsi komhlaba kwomoya opholileyo. Umzekelo, ukunciphisa iqondo lobushushu lomoya, inkampani enamanzi anzulu (i-16 degrees ehlotyeni, ebusika, i-14 degrees) ukuze i-generator yedizili ebekwe kubushushu bomoya ihlala i-25 degrees (ubuncinci be-22 degrees), ukuze imveliso Iyunithi inyuke nge-12 leepesenti.
Ukusetyenziswa kwenkqubo yenaliti yomphunga wamanzi abandayo, amanzi asetyenziswa phantsi komxholo wamanqaku ahlukeneyo abilayo phantsi koxinzelelo lweatmosfera eyahlukeneyo, ukufunxwa kwedizili yokufudumeza amanzi ashushu kwitanki yokutywina kompompo yokujija igesi ngokuhamba ngemilomo eyi-nozzle eyandisa umlawuli woxinzelelo itanki, i-ejector ekhawulezayo yokuhambisa izixhobo, itanki yokupholisa umphunga kude. Oko kwafakwa kwisitovu esiphezulu, ukuze ukuqhubekeka kugalelwe etankini yamanzi, indawo yokubila komphunga obilayo, amanzi ashushu asezantsi kwaye uninzi lwayo lube ngumkhenkce, umsebenzi oqhubekayo kubushushu obusezantsi, i-Everfount inokuvelisa ukupholisa kobushushu obuphantsi. amanzi.
Siyathemba ukuba le ndlela ingentla iyakusetyenziselwa ukunciphisa iqondo lokungenisa iiseti zejenereyitha yedizili ukuze isixhobo sikwazi ukufikelela kubushushu obufanelekileyo. Ewe kunjalo, ngenxa yobudlelwane phakathi komgangatho wamanzi kunye nokulula ukulinganisa, kukho isidingo sokunikela ingqalelo kwiindawo ezithile zamanzi anzulu, ke kuya kufuneka senze umsebenzi olungileyo wokucoca umlinganiso wolondolozo lwesiqhelo.